Jabuuti oo ka hor timid in ciidamada Mareykanka ee dalkeeda jooga faragelin ku sameeyaan Itoobiya - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Jabuuti oo ka hor timid in ciidamada Mareykanka ee dalkeeda jooga faragelin ku sameeyaan Itoobiya
Dowladda Jabuuti ayaa ka hor timid in ciidamada Mareykanka ay dhulkeeda u adeegsadaan faragelin ay ku sameeyaan dalalka dereiska la ah (Itoobiya).
Arintan ayaa timid markii Jeneraalka hoggaamiya ciidamada Mareykanka ee saldhigoodu yahay dalka jabuuti uu sheegay saameynta uu dagaalka Ethiopia ku yeelan karo gobolka Geeska Afrika, iyo sida ay ciidamada Mareykanka diyaarka ugu yihiin inay ka jawaabaan xasaradaha Gobolka. (Akhriso Warkan)
Wasiirka Reer Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa intaas ku daray in Jabuuti ay qadarineyso iskaashiga muhiimka ah ee ay la leedahay Mareykanka, ayna hubanti tahay in iskaashigan aanu aheyn mid ka dhan dal kasta oo ay noqoto.
Previous articleAlshabaab oo shaacisay magaca iyo Beesha uu kasoo jeedo Ninkii isku qarxiyey Kolonyadii AMISOM
Next articleJeneraal Laba-Afle oo shaaciyey inay Ahlu suna diiday Nabad raadintii uu ugu tegay mudo 12 Maalmood ah